विदेशमा लगानी किन रोक्ने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
माघ १७, २०७५ सुजीव शाक्य
काठमाडौँ — माघे संक्रान्तिमा तरुल खाँदा किन हो कुन्नि तरलताको कुरा मनमा आयो । शायद तरुलजस्तो जमिनमुनि बसेका अनेक डलरको सम्झनाले हो कि ! नेपाललिक्सबाट यी तरुल इन्द्रचोक र कति छिमेकी मुलुक हुँदै स्वीट्जरल्यान्डमा बास बसेको थाहा पाइयो ।
कतिचाहिँ भूउपग्रहको माध्यमबाट ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा गएर फेरि त्यही भूउपग्रहको माध्यमबाट नेपाल फर्केछन् । यी १५३ वर्ग किलोमिटरका टापुहरूमा ३५ हजार मानिस बस्छन् । तर तिनले संसारको लगानी चलाउने निपुणता हासिल गरेका छन् । कतिले मलाई सोध्ने गर्छन्, के यी तरुलहरू विदेशिएर तरलता अभाव भएको हो ? अलिअलि असर होला, तर नेपालमा तरलताको विषयमा छलफल जरुरी छ ।
कसको बैंक, को बैंकर
‘अर्थात् अर्थतन्त्र’ किताब लिएर देशका विभिन्न ठाउँमा मैले छलफल गर्दा एउटा सवाल उठ्ने गथ्र्यो । व्यवसायीले बैंकहरूलाई ब्याजदर उच्च भयो, बैंकहरूले धेरै नाफा गरे भनेर गाली गर्छन् । कतिले चोर, डाँका पनि भन्छन् । मेरो जवाफ रहन्छ– बैंकको सेयरमा लगानी नगर्नेहरूले हात उठाउनुपर्‍यो । केही हातमात्र उठ्छन् । बैंकहरूले बेसरी नाफा गरेरबोनस र लाभांश बाँड्दा ङिच्च हाँस्छन् । त्यसबखतसेयरधनीहरूले बैंकलाई नाफा धेरै भयो, लिने ब्याज र दिने ब्याजमा अन्तर धेरै भयो भनेनन् । यी प्रश्न ठिकसमयमा नगरेकाले नेपालमा बैंकहरूबाट लगानीकर्तालाई दिने लाभ उच्च बनाउने प्रतिस्पर्धा भयो । यसबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो असर भयो । अरु देशमा पनि घरमा सबभन्दा धेरै गाडी हुनेले ट्राफिकको गुनासो गर्छ । सबैले गाडी संख्या घटायो भने त जाम कम भइहाल्छ ।
नेपाल त्यो केही देशमध्ये एक हो, जसमा व्यापारीले बैंक पनि चलाउन पाउंँछ । धेरै देशमा यस्तो छैन । पसले मानिसले दिमाग पसल चलाउने जस्तै लगाउने भयो । तरकारी किनबेच जस्तै बैंकको सेयर किनबेच गर्नुपर्‍यो । बैंक ठिकसंँग चले–नचले के मतलब ! एटीएम मेसिन चले–नचले केको लिनुदिनु ! कार्ड चलाउँदा रेस्टुराँमा सजिलो कि गाह्रो, के मतलब ! बोर्डमा बसे भत्ता आउनुपर्‍यो, लगानीकर्ता भए बोनस सेयर आउनुपर्‍यो र कर्मचारी भए बोनस आउनुपर्‍यो र भएछ भने विदेशतिर ट्रेनिङमा जानुपर्‍यो । बैंकको सेवा र ग्राहकले पाउने सुविधा ठिक छ कि छैन, बुझ्ने कसलाई चासो वा फुर्सत ? धेरै बैंकका लगानीकर्ता सहकारीतिर पनि लागेका छन् । नेपालको समाजवादको परिभाषामा बैंकभन्दा सहकारी महत्त्वपूर्ण । यसलाई सरकारी अनुगमनबाट पनि छुट छ ।
तरलताको विषयमा बैंकहरूको रुचि धेरै हुनुपर्ने हो । यसमा अनुसन्धान र विश्लेषण जरुरी छ । बसको जस्तो सिन्डिकेट बनाएर र भत्काएर हल हुने छैन । ५० खर्बदेखि १०० खर्बको भ्यालु भएका बैंकहरूले जसरी सिंगल माल्ट ह्विस्की खान राम्ररी सिके, अब बैंकभित्र इकोनोमिस्ट र इकोनोमिक युनिट कसरी राख्न सिक्नपर्‍यो । सुरु–सुरुमा नेपालमा स्थित थिंकट्यांकहरूसंँग सहकार्य गर्ने हो कि ?
चालु पुँजी चाहियो
हामी नेपाली ससाना कुरामा लाग्दालाग्दै देशको अर्थतन्त्रको साइज दस वर्षमा दोब्बर भएको थाहै पाएनौं । हामी जग हालिसकेपछि बाथरुम कहाँ निकाल्ने भनेर सोच्छौं । जति व्यवसाय बढ्यो, त्यति धेरै चालु पँुंजी चाहिन्छ । ३० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले मात्र बढ्दा पनि डेढ अर्ब डलर अर्थात् डेढ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यो नेपालको पुँजीले भ्याउँदैन, नत दाताको सहयोगले ।
त्यसका लागि विदेशी लगानी चाहिन्छ । गत तीस वर्षमा विदेशी लगानीबिना अर्थतन्त्रलाई उच्च वृद्धितिर धकेल्नसकेको देश संसारमा छैन । नेपालले जुन राष्ट्रवादको नाममा विदेशी लगानीलाई अप्ठ्यारो बनाउने गरिएको छ, त्यो सोचबाट निस्कनु पर्नेछ । लगानीका निम्ति गुठी भोजजस्तो लगानी मेला गरेर मात्र हुँदैन । कानुन, प्रक्रियामा भएका समस्यालाई हटाउनुपर्छ । सिन्डिकेटले बाधा–अड्चन ल्याएको छ भने त्यसलाई भंग गर्नुपर्छ । म:म: व्यवसायमा झैं जसले पनि व्यवसाय सुरु गर्नसक्ने र नचले बन्द गर्नसक्ने हुनुपर्‍यो ।
नेपालमा लगानी गर्न कोही लाइन लागिरहेको छैन । हामी अरु देशसँंग प्रतिस्पर्धा गर्दैछौं। लगानी भित्र्याउन देश बाहिर पनि धेरै प्रयास गर्नुपर्छ । विदेश भ्रमणमा जाँदा पार्टीका सम्पर्क समिति, नेपाली विद्यार्थी र सयौं नेपाली संस्थामा गएर भेट्नु र भाषण दिनुभन्दा लगानीकर्तालाई भेट्ने गर्नुपर्‍यो । दूतावासमा तीजको पार्टी गरेर लगानीकर्ता आउने छैनन् ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालीले बाहिर गरेको
लगानीबाट आउने फाइदाले तरलताको समस्यासुल्झाउन सहयोग गर्छ ।
नेपालको विषयमा बोल्न सक्नुपर्‍यो । सहयोगको भिखभन्दा लगानीका अवसरहरूबारे चर्चा गर्न सक्नुपर्‍यो । त्यसका निम्ति पढ्नपर्‍यो र प्रस्तुति कसरी गर्ने हो भनेर सिक्नुपर्‍यो । भाषण मात्र दिने बानी गर्‍यो भने कुराकानी गर्न र प्यानलमा बसेर कुरा गर्न कति गाह्रो हुँदोरहेछ भन्ने बोध मानिसलाई भइरहेको छ । त्यसका निम्ति भाषामा निपुणता पनि चाहिन्छ ।
विदेशी टाई लगाउन सिक्यौं, विदेशी कमोडवाला ट्वाइलेट चलाउन सिक्यांै, विदेशी लेबलका मदिरा पिउन सिक्यौं र विदेशमा छोराछोरीलाई पढाउन सिक्यौं, ग्रिन कार्ड र पीआर लिन पनि सिक्यौं । तर किन अंग्रेजी भाषा राम्ररी बोल्न–सिक्न समस्या ? अंग्रेजी बोले नेपाली बिर्सिइँदैन । अंग्रेजी भाषाको ज्ञानलेनेपाली अझ निखारिनेछ । नेपालमा पैसाको तरलता बढाउन विदेशी लगानी चाहिन्छ । त्यस निम्ति हामीले नेपाललाई मार्केट गर्न सिक्नुपर्छ ।
विदेशमा लगानीले फाइदा
लुकी–लुकी रक्सी खाने र खाइरहेको छ भनेर थाहा पाउने समाज छ । लुकी–लुकी विदेशमा लगानी गर्ने र थाहा पाएर पनि नपाएको जस्तो गर्ने समाज हुनु आश्चर्य भएन । विदेशमा नेपाली लगानी दुई किसिमको हुन्छ । एउटा कानुनी रूपमा गर्न नमिलेर बिभिन्न बाटोबाट गर्न बाध्य हुने लगानी र अर्को नेपालमा कर छलेको तथा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको रकम विदेशमा गरिएको लगानी वा नेपालै फर्काएर ल्याउने पैसा । दोस्रो प्रकारको लगानीलाई कानुनी प्रावधानमा ल्याउन गाह्रो छ ।
किनकि यसमा राजनीतिक पैसा हुने गरेको पाइन्छ । सिधा हेर्ने हो भने नेपालमा दस प्रतिशत कमिसनतन्त्र छ, वर्षमा यो गैरकानुनी पैसा ६–७ हजार करोड हुने गर्छ । यसको एक चौथाइमात्र बाहिर गयो भने पनि धेरै हुन्छ । लगानीका लागि जाने पैसालाई जान दिनुपर्‍यो, तर राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव एक दशकअघि तयार छ ।
यो प्रस्ताव अनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालीले बाहिर गरेको लगानीबाट आउने फाइदाले तरलताको समस्या हल गर्न धेरै सहयोग गर्छ । भारतमा पनि यो संकुचित मनसाय नब्बेको दशकमा बदलियो । अहिले टाटा कम्पनीले चीनमा लगानी गरेर वर्षको १२ खर्बको व्यापार गरेर रकम भारत भित्र्याउँछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र पहिलेजस्तो होइन । यो गरिब मुलुक पनि होइन । यसको समस्या छिटो–छिटो बढ्ने बच्चाको जस्तो हो । धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, विशेषगरी पोषणको । तरलता अर्थतन्त्र वृद्धिका निम्ति चाहिने पोषण हो । यो पार्टीगत, जातिगत कुरा होइन । न यो एनजीओको गोष्ठीबाट समाधान हुने समस्या हो । यसलाई नेपाली अर्थतन्त्रको समृद्धितिर कसरी लाने भनेर नयाँ लेन्सबाट हेर्न जरुरी छ ।
प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०८:४४
रुवान्डाबाट सिक्ने कि !
प्लास्टिक झोलामा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण रुवान्डा सफा छ । हरियाली जताततै ।
श्रावण १८, २०७५ सुजीव शाक्य
काठमाडौँ — सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डको गफ छाडौं । सानो मुलुक रुवान्डाबाट सिकौं । रुवान्डा अहिले अफ्रिकाको आँखाका नानी भएको छ । चीनका रास्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केही दिनअघि रुवान्डा भ्रमण गरे । त्यहाँका राष्ट्रपति पल कगामे संसारका शक्तिशाली मुलुक र त्यहाँका नेताहरूले भेट्नैपर्ने व्यक्ति भएका छन् ।
उनी क्यानाडामा भएको जी– ८ राष्ट्रको भेलामा गए । हालसालै भएको विश्वकप फुटबल उद्घाटनमा मस्को पुगेका थिए । बेलायतले कहिले राज्य नगरे पनि रुवान्डा कमनवेल्थ (बेलायतले राज गरेका राष्ट्रहरू) देश बनेको ८ वर्ष भयो । २०२० मा कमनवेल्थ राष्ट्राध्यक्षको शिखर सम्मेलन रुवान्डाको राजधानी किगालीमा हुँदैछ । फ्रान्ससँग चिसिएको सम्बन्ध त्यहाँ नयाँ राष्ट्रपति म्याक्रोनको उदयपछि सुधार
अहिले रुवान्डा पहिले फ्रान्सको अधीनमा रहेका राष्ट्रहरूको समूह (फ्रान्कोफां) राष्ट्रहरूको अध्यक्ष पदको दाबेदारका रूपमा लबी गर्दैछ । भूटानको दुई तिहाइ भूमि भएको भूटानमा नेपालको आधाभन्दा कम जनसंख्या (करिब १.२ करोड) छ । चौबीस वर्षअघि संसारले कहिल्यै नबिर्सने नरसंहारमा असी लाख जनतामध्ये १२ लाख मारिएका थिए । त्यस्तो इतिहासबाट परिवर्तनको दिशामा लम्किएको यो मुलुकबाट सिक्न सकिने कुरा धेरै छन् ।
सफा हुन धनी हुनुपर्दैन
किगाली विमानस्थलमा सामान लिएपछि नेपालमा जस्तै चेकिङ हुन्छ । तर सुन होइन, प्लास्टिक झोलाका लागि । प्लास्टिकको झोला फ्याँक्न लगाइन्छ । सबै अचम्मित हुन्छन् । प्लास्टिकको झोलामा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण रुवान्डा सफा छ । सहर मात्र होइन, गाउँका कुनाकाप्चा पनि सफा । हरियाली जताततै । जहाँ पायो, त्यहाँ पसल राख्न पाइन्न । झन् फुटपाथ र खाली ठाउँमा एकदमै कडा । बाटो हिँड्दा खान पाइँदैन । तोकिएको ठाउँमा मात्र खानुपर्छ ।
रुवान्डा विकासशील देश भएर पनि विकसित देशजस्तै सफा छ । सफा हुनु धनी देश र धनी मानिसको पहिचान भन्ने ठानिएको छैन । सफा हुनु नेपालमा जस्तो पुँजीवादको प्रतीक भन्ने बुझाइ छैन । नेपालले सिक्नुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण पाठ हो । नेपालमा समाजवादका नाममा हामीले फोहोर, दुर्गन्ध र छाडापनलाई प्रतीकका रूपमा अघि सार्‍यौं । सफा, चिटिक्क र स्वस्थ हुनु पुँजीवादको अनुशरण गर्ने हो भन्ने बुझाइ रह्यो ।
रुवान्डाका नागरिकले आय धेरै नभए पनि भएकालाई जतन गरेर राख्न सिकेका छन् । सामाजिक र पारिवारक कार्यक्रमका निम्ति ऋण लिएर लुगाफाटा किन्ने गर्दैनन् । घरमा तन्ना, तौलिया तीन दिनमा एकपटक फेरेर धुनुपर्ने स्कुलबाटै सिक्छन् । मोजा गनाउन सक्छ भनेर बुझेका छन् । त्यसका निम्ति नियमित खुट्टा धुन्छन् । सफा हुनुलाई सभ्यतासँंग जोड्छन् ।
ठूलो सपना ठूलै परिवर्तन
सानो मुलुक, सानो अर्थतन्त्र तर ठूलो सोच । पर्यटनका निम्ति रुवान्डाको आकर्षण गोरिला हो । पर्यटक १५ सय डलर तिरेर गोरिलासँंग एक घन्टा समय बिताउन सक्छन् । होटलहरू ५ सयदेखि २५ सय डलर प्रतिरात पर्ने खालका छन् । रुवान्डाले उच्च श्रेणीका पर्यटक भित्र्याउने गर्छ । विदेशी पर्यटक दुई लाखजति भित्रिन्छन् । यति कम विदेशी पर्यटकबाट रुवान्डाले वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कमाउँछ । नेपालले पाँच गुणा बढी पर्यटक भित्र्याएर ५८ अर्ब रुपैयाँ कमाउने गर्छ ।
अहिले रुवान्डा अफ्रिका महाद्वीपको ‘कन्फरेन्स’ गन्तब्यका रूपमा चिनिएको छ । उसले ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर कन्फरेन्स हल बनाएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो हुनुका साथै हवाई सम्पर्क विस्तारले धेरै ठूलठूला कन्फरेन्स रुवान्डामा हुने गर्छन् । कन्फरेन्सले पर्यटन व्यवसायको काँचुली फेर्न सहयोग गरेको छ ।
रुवान्डामा सोच ठूलो छ । भनेको कुरा गर्छन् । चार वर्षअघि बनाउन थालिएको दोस्रो विमानस्थल २०१९ को अन्त्यमा तयार हुनेछ । अमेरिकासंँग सिधा हवाई सम्पर्क अर्को महिना सुरु हुँदैछ । ६० अर्ब रुपैयाँको सांस्कृतिक पर्यटन स्थलको बीसवर्षे काम सुुरु भएको छ । चार चरणमा निर्माण हुने यो प्रोजेक्ट तयार हुनेछ । रुवान्डामा बीसवर्षे योजना बन्छन् । पाँच वर्षपछि आउने रेलसेवाका निम्ति विद्यार्थीले रेल सम्बन्धी कोर्स पढ्न थालिसकेका छन् ।
रुवान्डाका नागरिक अरू देशमा काम गर्न रुचाउँदैनन् । सरकारले केही कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारलाई अघि सार्न खोज्दैछ, तर नागरिकले त्यति रुचि देखाएका छैनन् । आफ्नो देशमा काम गर्नुलाई उनीहरू महत्त्वपूर्ण ठान्छन् । सानो काम भए पनि त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन् ।
सरकारी कार्यालयमा सचिव स्तरको व्यक्तिलाई भेट्न जाँदा कुर्सी नपुगे आफै लिएर आउँछन् । नेपालमा जसरी घन्टी ट्याउँ–ट्याउँ गर्दैनन् ।
आफ्नो देशप्रति गौरव धेरै ठूलो कुरो हो । हामी नेपाली पाएसम्म आफ्नो देशको खिल्ली उडाउँछौं । सामाजिक सञ्जालमा जे पायो, त्यही भन्छौं । नेपाल खतम छ भन्ने बित्तिकै तक्मा नै पाउनेजस्तो व्यवहार गर्छौं । रुवान्डा यो हिसाबले अलग छ । ऊ संसारको उदाउँदो शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा आफूलाई चिनाउन खोज्छ । विदेशी लगानी र सीपमा विश्वास राख्छन् र सबैसंँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छन् ।
हामी पनि यो सानो मुलुकबाट सिक्ने कि ?